ONE Championship ကြိုးဝိုင်းတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့် Brandon Vera က ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူရန် အသင့်ဖြစ် - Amazing Yangon
The New Stories & Events in Yangon non-stop onadaily basis.
ONE Championship ကြိုးဝိုင်းတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့် Brandon Vera က ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူရန် အသင့်ဖြစ်
Home /Featured, One Championship/ONE Championship ကြိုးဝိုင်းတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့် Brandon Vera က ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူရန် အသင့်ဖြစ်
Featured,One Championship |
Brandon Vera အနေဖြင့် ONE ဟဲဗီးဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဆက်လက်ထားရှိနိုင် လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေသည်။
အဆိုပါ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရွှေခါးပတ်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသော Vera သည် လာမည့်ONE: CONQUEST OF CHAMPIONS ပြိုင်ပွဲကြီး၏ အဓိကပွဲစဉ်တွင်Mauro Cerilli နှင့် ရင်ဆိုင်ကာ ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Veraသည်ONE:AGE OF DOMINATION ပြိုင်ပွဲကြီး၏အဓိကပွဲစဉ်အဖြစ် Hideki
Sekine ကို ရင်ဆိုင်ကာ ၎င်း၏ခါးပတ်ကို အောင်မြင်စွာ ကာကွယ်ထား သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ပြိုင်ပွဲကြိုးဝိုင်းနှင့် ဝေးကွာနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ကာလကြာရှည်စွာအနားယူနေခဲ့သော်လည်း Vera က မကြာခင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ပွဲကြီးတွင် ပို၍ ကြံ့ခိုင်သောပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဟု ဆိုထားသည်။
Vera နှင့် Cerilli တို့သည်လာမည့် နိုဝင်ဘာလ၂၃ ရက်နေ့တွင် မနီလာမြို့၊ Mall of Asia Arena တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် ONE Championship ကြိုးဝိုင်းကြီးထဲ၌ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ် သွားကြမည်ဖြစ်သည်။
Veraက “ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ချန်ပီယံဖြစ်ရတာ ကျွန်တော် သိပ်ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြိုင်ပွဲနဲ့ဝေးကွာနေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ အလေ့အကျင့်မရှိဘူး၊ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မတွေးပါဘူး။” ဟု မနီလာတွင် မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သော
“ကျွန်တော်အရင်ကထက်ပိုပြီး ကြံ့ခိုင်လာတယ်၊ မြန်လာတယ်၊ ပိုပြီး ထက်မြက်လာတယ်။ ONE ကြိုးဝိုင်းထဲပြန်ဝင်တဲ့အချိန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖွဲ့သားတွေက သေချာကြိုးစားထားခဲ့ပါတယ်။” ဟု Vera က ဆက်လက်ပြောသည်။
Veraသည် ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံလောကမှ ဝေးကွာနေသော အချိန်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကစားသမားဘဝမှအပြီးတိုင်အနားယူသောအချိန်ရောက်မှသာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ရန်ရည် ရွယ်ထားသော Vera က ပြိုင်ပွဲပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ရ သည့်အခိုက်အတန့်သည် မိမိအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ သွားသကဲ့သို့ ခံစားရသည်ဟု ဆိုထားသည်။
“ပြိုင်ပွဲ ကြိုးဝိုင်းဟာ ကျွန်တော်အတွက် အိမ်လိုပါပဲ။ ကျွန်တော် ကြိုးဝိုင်းထဲရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်ကို တကယ်လွမ်းနေပါတယ်။ သောကြာနေ့ညကျရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံးရှေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ချန်ပီယံခါးပတ်က ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲရှိနေမှာပါ။” ဟု Vera က အလေးအနက်ပြောကြားသည်။
Cerilli ကလည်း ၎င်းအနေဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်ကို လာရခြင်းအကြောင်းသည် ONE ဟဲဗီးဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကို သေချာပေါက်ရယူရန်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားသည်။
“BrandonVera က သိပ်ကိုတော်တဲ့ ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခု သူအရင်ကလောက် မတော်တော့ဘူး။
ကျွန်တော်အခု ONE ဟဲဗီးဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကို အရယူဖို့ ရောက်လာတာပါ။” ဟု အရွှန်းဖောက်၍ ပြောသည်။
Cerilliက Vera အပေါ် လေးစားအားကျမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး၏ ကိုယ်ခံပညာကစားသမားတစ်ဦးအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးသောအချိန်ကာလမှာ ကုန်ဆုံးသွားပြီဟု တွေးထင်လျက်ရှိသည်။
“နိုဝင်ဘာ၂၃ရက်နေ့ ကြိုးဝိုင်းထဲဝင်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ရယူသွားမှာပါ။” ဟု Cerilli က အဆုံးသတ်ပြောကြားသည်။
???ရန်ကုန်ရဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုသိဖို့ amazingyangon Page ကို Like & Share လုပ်ထားလိုက်ပါ။
ပုညစိုင်း၏ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက် စိတ်ဓါတ်နှင့် အောင်မြင်မှုဘဝလမ်း
ONEChampionship နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆို လိုက်သော Yoshihiro Akiyama
Essential of Digital Marketing (batch-2 1/2020) သငျတနျးကို CSR Program March 11, 2020
Essential of Digital Marketing (batch-2 1/2020) သငျတနျးကို CSR Program အနဖွေငျ့ Management Intellect Institute မှ စီစဉျဖှငျ့လှဈခွငျးဖွဈသညျ။ စြေးကှကျစီးပှားရေးရဲ့အဓိကမွုပျနှံမှုအမြားစုဟာ Digital ပျေါမှာ အမြားအပွား သုံးစှဲလာကွပါတယျ။စားသုံးသူတှနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ထုတျကုနျတှေ၊ ၀နျဆောငျမှုတှအေပျေါ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျဆံရေးတှေ တညျဆောကျဖို့အတှကျ Digital Communication တှကေို စနဈတကြ တညျဆောကျ အသုံးပွုလာကွပါပွီ။ စားသုံးသူတှေ အဓိကထားရှားဖှနေတေဲ့ Digital Information Search Channel တှပေျေါမှာ Branding တညျဆောကျလာကွတယျ၊ ကောငျးမှနျတဲ့ Value တှပေေးနိုငျအောငျ လုပျဆောငျလာကွတယျ၊သတငျးအခကျြအလကျတှကေို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီပေးနိုငျလာပါတယျ၊ စားသုံးသူတှရေဲ့ အခကျအခဲတှေ မေးခှနျးတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျ ရှငျးလငျးလာနိုငျတယျ၊ စြေးကှကျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ […]
ONE: King of the Jungle ကို လကျလှတျမခံ သငျ့သညျ့ အခကျြ ၄ ခကျြ February 26, 2020
ယခုနှဈအတှငျး ONE Championship ရဲ့ စတုတ်တမွောကျ ပွိုငျပှဲကွီးဖွဈတဲ့ ONE: King of the Jungle ကို လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၈ ရကျမှာ စငျကာပူနိုငျငံအတှငျး ကငျြးပပွုလုပျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားမြားစှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒီပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေို စုစညျးဖျောပွ လိုကျရပါတယျ။ ၁။ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ စိနျချေါပှဲ တှဲဆိုငျးနှဈတှဲ ပါဝငျခွငျး အခုပွိုငျပှဲမှာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံနရောကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ အဓိက တှဲဆိုငျးနှဈဆိုငျး ပါဝငျနတောက King of the Jungle ကို လကျလှတျ မခံသငျ့တဲ့ အခကျြတဈခကျြ ဖွဈပါတယျ။ ခေါငျပှဲမှာ ONE အကျတမျဝိတျတနျး မှထေိုငျးနဲ့ Kickboxing ခနျြပီယံ Stamp Fairtex […]
Amazingyangon.com is the online magazine that offers the most accurate and interesting information about Yangon. It features the new stories and events in Yangon non-stop onadaily basis. You can also find the detailed information about the live shows, health programs, and also the recommendations for the tastiest restaurants in the city. For those who would like to travel, there is also the travel packages offers, and hotel information available. We strive to offer youacomplete magazine with movie reviews, football results, fashion advice, and cooking program all featured in here.
Suzuki (Myanmar) Motor Co., Ltdမှ ရောငျးအားအကောငျးဆုံး Sedan Suzuki Ciaz အဆငျ့မွှငျ့မျောဒယျသဈကို မွနျမာစြေးကှကျတှငျမိတျဆကျ
Ferrovit Myanmarမှ Covid-19 ကာလအတှငျး လိုအပျသူမြားကိုထောကျပံ့ရနျထောငျပေါငျးမြားစှာသောဆေးဗူးမြားကို ခဈြသုဝေ၏ ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးသို့လှူဒါနျး
KBZPay က မွနျမာနိုငျငံ၏ ပထမဦးဆုံး ဒဈဂဈြတယျစနဈ ခြေးငှေ ဝနျဆောငျမှုအဖွဈ ဈေးဝယျခြေးငှေ ကို စတငျမိတျဆကျပွီး ခြေးငှရေယူသူမြားအတှကျ Credit Score တဈခု ရရှိထားနိုငျရနျ ဖနျတီးပေးမညျ